Beesha RO MAM oo ka kooban 54 kooxo qowmiyadeed ah oo ku nool Vietnam - Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam
Tasaga RO MAM waxaa degan dad gaaraya 418 qof Le Village Mo Rai Commune, Degmada Sa Thay of Kon Tum1 Gobolka. Afka RO-MAM waxaa iska leh Isniin-Khmer2 group.
Formerly, RO MAM wuxuu inta badan ku noolaa bariis dhegdheg leh oo ah cuntadooda daruuriga ah ee milpas. Rag labo godad ayey ka qodeen haweenkuna gadaashooda ayey ka aadeen si ay iniino ugu dhex abuuraan godadka. Ugaarsiga iyo urursiga ayaa wali door muhiim ah ka ciyaara noloshooda dhaqaale. Waqtigan xaadirka ah, waxay beeraan oo keliya bariiska iyo com laakiin sidoo kale qaxwada iyo basbaaska. Xannaanada ayaa sidoo kale la dalacsiiyaa. Dhex-dhexaadinta tolkooda ayaa ah midda ugu horumarsan laakiin dhawaanahan way hoos u dhacday, maxaa yeelay RO MAM waxay qaadataa dharka warshadaha ard ee dharka u diyaarsan.
RO MAM dumarka badanaa waxay xirtaan sambabka iyo funaanado gacmo gaab ah. Sanbabada waxaa laga sameeyaa maro aan dhab ahayn oo aan qurxin waxayna ku dhacaan jilbaha hoostooda. Ragga waxay xirtaan dhar dhexda ka mid ah kaas oo dhabarka hore uu ka laalaado jilbaha iyo dhabarka dambe illaa dhalaankooda. Sida ku xusan caadooyinkii hore, dhalinyarada waxaa la galiyay ilkaha kore. Maalmahan, dhaqankan waa la tirtiray. Dumarku waxay jecelyihiin inay xirtaan jijimooyin jijimooyin iyo silsilado ka samaysan kuul.
Ttuulada RO-MAM waxaa madax looga dhigay caaqil duqow ah oo dadka tuuladu doortaan. Waagii hore tuulo RO-MAM waxay ka koobnaayeen ilaa toban guri oo dhaadheer. Maalmahan guryaha dheere lama dhisin taa badalkeeda, RO-MAM waxay ku nool yihiin guryo yar yar oo saqafka ka sameysan oo saqaf ah. Waxaa jira a rong (guryaha la wadaago) gees ka gees tuulada.
Tasaga RO MAM dhaqankiisa meher waxaa lagu sameeyaa labo talaabo: hawlgal iyo aroos. Daacadnimada ayaa lagu muujiyey Nolosha wadaagga ah. Qofku markuu dhinto aaskiisa waxaa lagu fulinayaa hal ama laba maalmood gudahood. Qabuuraha ayaa ku yaal galbeedka tuulada qabriyada si habsami leh ayaa loo kala habeeyay. Qofka dhintay waligiis laguma aasin isagoo u jeeda tuulada xabaalahana waligiis kuma yaalo dhanka bari iyadoo laga baqdin qabo in dhimashadu ay marto tuulada sida qorraxdu u dhacdo oo kale. Aaska ka dib, guri xabaal ayaa la dhisayaa marxuumkana waxaa lagu siinayaa hanti.
Twuxuu RO MAM aaminsan yahay wuxuu la xiriiraa beeraha. Caadooyinka iyo xafladaha waxaa lagu qabtaa wareegga wax soosaarka laga soocayo nadiifinta dhulalka dhulka ilaa qaadista bariiska ilaa maqsinku waa waxqabadyadooda wadaagga ah ee illaa iyo hadda la hayo.
Waxqabadyada dadka RO MAM ee gobolka Kon Tum (Xigasho: Daabacayaasha VNA)
(Booqday jeer 1,192, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,540
← Beesha HRE ee 54 qowmiyadeed ee Vietnam
Beesha NUNG oo ka kooban 54 qowmiyadeed oo ku nool Vietnam →